Yako Yakavimbika Laser Cutter Supplier, Professional Laser Solutions
Nyoresa Sublimation Kugadzira
>> Ongorora zvimwe
Zvinhu Zvako Zvakadhindwa
Yakakura Format Laser Cutter
Mukati me3.2 metres Yakafara
Ramangwana reLaser Kucheka
MimoWork inyanzvi mukugadzira zvigadziriso zvelaser zvezvisiri-simbi zvekugadzira zvinhu mumunda wekushambadzira, mota & ndege, fashoni & zvipfeko, kudhinda kwedhijitari, indasitiri yemachira esefa, nezvimwe.
Isu tinopa yakagadziridzwa uye yakasarudzika laser yekucheka michina yemhando dzezvido kuti tikwanise mashandiro evatengi vedu uye kugadzira.
Iyo yakapusa yekucheka nzira yedhayi sublimation zvigadzirwa.
Yakanyatso ratidziro yekuona contour uye chaiyo contour kucheka kune chero pateni & chimiro.
Kushanda kwakanyanya neakakwira otomatiki yekudyisa, kutora mifananidzo uye kucheka contour.
Nyanzvi yeFlexible Materials Kucheka.
Chero kukanganisa kana kutambanudza kunogona kuzivikanwa neMimo Contour Recognition System uye zvimedu zvakadhindwa zvichachekwa muhukuru uye chimiro.
Yakanyatsovharwa muviri dhizaini inosarudza vimbiso yekuchengetedza mukucheka kugadzirwa
Yakabatanidzwa nekumhanya kukuru, kuita kwakavimbika, uye maficha akakodzera, anochinjika kugadzirisa odha yega yega.
Yakanakisa yekupinda-level muchina wehombe-fomati yakasimba zvinhu.
R&D yekugadzira acrylic nehuni.
Inobvumira kuburitsa kusingabvumirwe & kurodha.
Kumhanya kwepamusoro uye kucheka chaiko.
Unrivaled sarudzo yekucheka zvinhu zvinochinjika.
Misoro miviri yelaser inofamba yakazvimiririra, kaviri kugona kwako (sarudzo).
Nesting Software inochengetedza zvinhu zvako muhukuru dhigirii.
Kuramba uchicheka nekudyisa otomatiki.
Yakanakira kucheka technical textile.
Basa rine simba rinogadzira kusingaperi versatility.
Isiri-inobata ink-jet kudhinda tekinoroji (optional).
Huru yekushanda tafura saizi inogoneka.
Galvo Laser Engraver uye Marker 40
Yakanakira kumaka kana kutsvoda-kucheka asiri-simbi workpieces senge kupisa kupisa firimu.
3D Dynamic yakatarisa inotyora miganhu yezvinhu.
Inobhururuka laser yekumaka kuvaka mutsara wegungano (sarudzo).
Pre-sales consulting yakakosha kuti udzidze nezve zvimwe zvaunoda.Iyo inokodzera iwe ndiyo yakanyanya kunaka!
MimoWork laser michina inovhara zvakasiyana zvinodiwa kubva kwakasiyana minda.
Yekuwedzera uye multifunctional laser sarudzo dziripo kune dzakasiyana siyana dzakagadziridzwa zvinodiwa.
MimoWork Service inoita basa rakakosha mukuona kushanda kwakavimbika kwemichina yedu yelaser kuitira kuti mutengi wedu agare achinzwa akasiyana.
Chikwata cheMimoWork Service chinogara chichiisa zvinodiwa nevatengi vedu pamusoro pezvedu kubva padanho rekutanga rekuyedza zvinhu kusvika pakatanga-laser system.
Ona Zvese Zvishandiso
Kwemakore makumi maviri, MimoWork yakatsaurirwa kusundira
iyo miganho yelaser tekinoroji nebhizinesi idzva
Ona Zvose Zvishandiso
Kucheka Chigamba NeMimoWork
Laser Cheka Patch Chimiro Hembe Dzako muFashoni neLaser Cheka Zvigamba Zvinogona kushandiswa nechero chero chinhu chauri kuda kuona, kusanganisira jeans, majasi, t-shirts, sweatshirts, shangu, mabhegi, uye kunyange mavhavha efoni.Ivo...
Ita kuti Iitwe kamwechete neLaser PCB Engraving
Ita kuti Iitwe kamwechete neLaser PCB Etching PCB, mutakuri wekutanga weIC (Integrated Circuit), inoshandisa maitirwo ekufambisa kuti asvike kubatana kwedunhu pakati pezvinhu zvemagetsi.Sei iri kadhi redunhu rakadhindwa?iyo condu...
Chii chinoita kuti laser engraver yakasiyana kubva kune laser cutter? Ungasarudza sei laser muchina wekucheka uye kunyora?
Kuomesa-kumisa Matanho eCO2 Laser System muChando
Pfupiso: Chinyorwa ichi chinonyanya kutsanangura kukosha kwelaser yekucheka muchina wechando kugadzirisa, iwo musimboti uye nzira dzekugadzirisa, maitiro ekusarudza antifreeze yemuchina wekucheka laser, uye nyaya dzinoda ...
Tsvaga Laser Technology neMimoWork
unoda kuziva zvakawanda nezvemwenje wemazuva ano here?
Wobva wanyorera kutsamba yedu.